गाजरमय फूलबारी – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७१ चैत्र १९, बिहीबार ०१:३१ गते
भरतपुर । साविकको फूलबारी गाविस र अहिलेको भरतपुर नगरपालिका वडा नं. १९ मा पर्ने फूलबारीमा गाजर खेती निकै फष्टाएको छ । फूलबारी गाउँका धेरैजना किसान यो समयमा गाजर उखेल्न, पखाल्न र बजार पठाउन व्यस्त रहेको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय जिल्लाकै नमुना गाजर खेती हुने ठाउँ भनेर फूलबारीलाई चिनिन थालेको छ ।
‘धान काटेपछि गरिने गाजर खेतीले हुने आम्दानी पनि सन्तोषजनक नै छ’ विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय फूलबारीका बासिन्दा गणेश पौडेलले भने, ‘गाजर खेतीले सन्तुष्टि दिएको छ । फूलबारीमा गाजर खेती सुरू भएको तीन दशकअघि नै हो, तर व्यावसायिक रुपमा फष्टाएको भर्खर–भर्खर हो ।’
फूलबारीका अगुवा किसान चन्द्रप्रसाद अधिकारीले विसं. २०३२ सालमै थोरै ठाउँमा गाजर लगाएका थिए । ‘नारायणगढमा रहेका एकाध होटलले गाजर मगाउँथे । चार मुठा मगाए चारै मुठा लिएर जानु पर्दथ्यो । पाँचवटा लगे बिक्री हुन्थेन, फर्काएरै ल्याउनु पर्दथ्यो’ उनले सुनाए ।
अधिकारीले अहिले १५ कठ्ठामा गाजर खेती गरेका छन् । उनले दुई सय क्विण्टलसम्म गाजर बेचेका छन् । गाउँमा चार बिघामा गाजर लगाउने पनि छन् । मिहिनेत र स्याहार धेरै नचाहिने गाजर खेती धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको उनले बताए ।
धान काटेपछि गाजर लगाउने गरिन्छ । लगाएको चार महिनामा बिक्री गर्न लायकको हुन्छ । ‘अफ सिजनमा निक्लियो भने क्विन्टलको ३५ सय र सिजनमा निस्किदा कम्तीमा पनि नौ सय रूपैयाँ क्विन्टलमा बिक्री हुन्छ’ अधिकारीले जानकारी दिए ।
माघ वरै र जेठमा बिक्री हुने गाजरले धेरै पैसा पाउने गरेको उनले बताए । ‘तर अफ सिजनमा खासै यहाँ गाजर हुँदैन । उही सिजनमा निस्किराखेको छ । तैपनि मूल्य नपाएको अवस्था भने छैन’ अधिकारीले भने । गाजर स्थानीय बजारमा कमै खपत हुन्छ ।
काठमाडौं पोखराबाट व्यापारीहरु गाडी नै लिएर गाजर किन्न घरघरमा आउने गरेको किसानहरु बताउँछन् । एक कठ्ठामा १० देखि २० क्विन्टलसम्म गाजर फल्ने गरेको छ । सामान्य गोडमेल र मलखादको भरमा यो उत्पादन लिन सकेको गाउँलेहरु बताउँछन् ।
धान काटेपछि पहिला मुसुरो गहुँ छर्ने चलन थियो । अहिले लगभग हटेको अवस्था छ । राजनीतिकर्मी र सामाजिक कार्यकर्ता फूलबारी निवासी सरिता केसी पनि छ वर्षयता गाजर खेतीमा छन् । यो खेतीबाट उनी सन्तुष्ट पनि छन् । यसले लगानी अनुरूपको प्रतिफल दिने गरेको केसीले बताइन् ।
‘यो खेतीमा ५० हजार रूपैयाँ लगानी गर्नु भएको छ भने ५० हजार रूपैयाँ नै तपाइँ कमाउन सक्नुहुन्छ । अर्थात् जति लगानी गरेको छ, खर्च कटाएर त्यति नै आम्दानी लिन सकिने खेती हो यो’ केसीले भनिन् । आम्दानी राम्रो हुन थालेपछि एकपछि अर्को किसान यसमा लागेका छन् ।
सरिता केसीको अनुमानमा फूलबारीमा रहेका ८५ प्रतिशत किसानले धेरै थोरै भए पनि गाजर खेती गरेका छन् । अगुवा किसान चन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार चितवन जिल्लामा जति खेती हुन्छ, त्यसको आधा फूलबारीमा हुने गरेको अनुमान लगाउँछन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले फूलबारीलाई तरकारी विशेष क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाभर १२० हेक्टरमा गाजर खेती हुन्छ । वार्षिक उत्पादन एक हजार ६९४ टन रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।